အိမ်လုပ် Dippin '' Dots အရည်နိုက်ထရိုဂျင် Ice Cream
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်နိုက်ထရိုဂျင် Dots Make
Dippin '' Dots ထဲမှာအေးခဲ flash ကိုဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုရေခဲမုန့်ထားရှိရေး အရည်နိုက်ထရိုဂျင် ။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တကယ်ကယ့်ကိုရိုးရှင်းပြီးသည်နှင့်လေးတွေများအတွက်တစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းကိုစေသည်။ ဤတွင်သင့်ကိုယ်ပိုင် Dippin '' Dots ရေခဲမုန့်လုပ်ပုံကိုပါပဲ။
Dippin '' Dots Ice Cream ပစ္စည်းများ
ရေခဲမုန်အစက် လောင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး သို့ရေခဲမုန့် အရည်နိုက်ထရိုဂျင်။ အဆိုပါပူနွေးရေခဲမုန့်အရောအနှောပုံသဏ္ဍာန်ထဲမှာနိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းနှင့်အဆက်အသွယ်အပေါ်သို့ splatters ။
ရေခဲမုန့် (မည်သည့်အရသာ, ဒါပေမယ့်ရောနှော-ins နဲ့ရေခဲမုန့်ကိုမသုံးကြဘူး)
အဆိုပါ Dippin '' Dots Make!
သငျသညျဝယျနိုငျသော Dippin '' Dots အရည်နိုက်ထရိုဂျင်မှရေခဲမုန့်ရောနှောသို့မဟုတ်အရည်ပျော်ရေခဲမုန့်မျိုးစုံအရသာဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရောင်တွေ, စာရေးလာပါတယ်။ သငျသညျရောင်စုံအစက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကရေခဲမုန့်၏တဦးတည်းအရသာထက်ပိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအရသာတစ်ကြိမ်ထည့်ပါ။ အတူတူသူတို့ကိုအရည်ပျော်မနေပါနဲ့ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံတစျခုအရောင်ရမယ်!
ရေခဲမုန့်ရောနှောပြင်ဆင်ပါသို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်အရည်ဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျနေတယ်ဆိုရင် ရေခဲအရည်ပျော် မုန့်, သင်ရေခဲမုန့်အတွက်လေကောင်းလေပူဖောင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ချင်သောကွောငျ့ကြောင့်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီခဏထိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ အလွန်အကျွံဝေဟင်သင့်ရဲ့ရေခဲမုန့်ရှိသည်ဆိုပါကကနိုက်ထရိုဂျင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ float နှင့်ရုံထက်ဘောလုံးအတွက်အေးခဲပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရေခဲမုန့်အောင်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှကိုစာရွက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ လွယ်ကူသောဗားရှင်းရောမွှေဖို့ဖြစ်ပါတယ်:
4 ခွက်မိုးသည်းထန်စွာမုန့် (ကြာပွတ်မုန့်)
1-1 /2ခွက်တစ်ဝက်နှင့်တစ်ဝက်
1-1 /2ခွက်သကြား
အဆိုပါပေါ်သို့အရည်ကျိုရေခဲမုန့်သို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်စာရွက် Drizzle အရည်နိုက်ထရိုဂျင် ။ သင်အရည်လောင်းဒုက္ခရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦး baster သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ် ketchup ပုလင်းကိုအသုံးပြုပြီးအတွက်ရေခဲမုန့် squirt နိုင်ပါတယ်။
ယင်းနှိုးဆော် ရေခဲမုန့်ထည့်သွင်းနေချိန်မှာနိုက်ထရိုဂျင်။ သငျသညျမျောသို့မဟုတ်အတူတကွ clumping ကနေရေခဲမုန့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလိုရှိ၏။ သင်သည်မည်သည့်ပိုပြီးများအတွက်အခန်းတစ်ခန်းမရှိသည်အထိရေခဲမုန့်ထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အစာစားရန်ရေခဲမုန့်ကိုတက်ထက်တောင်ဦး။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လျှာကိုသို့မဟုတ်သင့်ခံတွင်း၏ခေါင်မိုးကပ်ကြလိမ့်မည်သင်၏နှုတ်၌မဆိုထည့်သွင်းမတိုင်မီသို့မဟုတ်အခြားကအနည်းဆုံးပုံမှန်ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်တက်နွေးပါစေ! သင်ကရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်သူတို့ကိုသိုလှောင်ခြင်းဖြင့်အေးခဲ uneaten ရေခဲမုန့် "အစက်" ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
တစ်ဦး Unpoppable CD ကိုပူဖောင်းမှုတ်ရန်ကဘယ်လို
10 မရှိမဖြစ် Columbian ဆဲလ်ဆာသီချင်းများ
Stryper - ခရစ်ယာန်ခက်ရော့ခ်တီးဝိုင်း Stryper ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အကူးအပြောင်းမွန်း Gemini ၌တည်ရှိ၏
အဆိုပါ Frank နှင့် Lombard ၏ Charlemagne ရှငျဘုရငျ
Venus Sagittarius မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ
Smoking ဆေးပြင်းလိပ်: ဝါသနာ, Habbit, ဒါမှမဟုတ်အပြည့်အဝစွဲ?
Archeopteryx တစ် Bird ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒိုင်နိုဆောခဲ့သလား
S က Orbital
တစ်ဦး Chainsaw ၏အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းများ